My iPad skrini yakaputsika! Heino mhinduro yekupedzisira. - Zvimwe
bhatani repamba repamba haripindure
iphone haina kukwana zvakakwana icloud
nzira yekuwana munhu nenhamba yavo yefoni
My iPad skrini yakaputsika! Heino mhinduro yekupedzisira.
Yako iPad ine yakaputsika skrini uye iwe unoda kuigadzirisa. Zvinogona kuva zvakaoma kuziva kuti ndezvipi zvaunogona kugadzirisa iPad kana kuti ndeipi sarudzo yakanakira iwe. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kwauri zvekuita kana yako iPad skrini yaputsika kuti iwe ugone kuigadzirisa nhasi .
Ongorora kukanganisa kwePadad yako
Izvo zvakakosha kuti utarise kuti yakawanda sei yako iPad skrini yakatsemuka usati waedza kusarudza kwekuigadzirisa. Kana iyo skrini yakatsemuka zvachose, iwe ungangoda kuigadzira nekukurumidza sezvazvinogona.
Kana chete chikamu chidiki cheiyo skrini chakatyoka, ungangoda kugara nacho. Ini ndaive nekakutsemuka padiki pane yangu iPhone 7 yandisina kumbogadzirisa. Mushure mekanguva, ndakapotsa ndakanganwa kuti ndaivapo! Zvidiki, zvakapfava kutsemuka kazhinji hazvikanganise zvaunogona uye zvausingakwanise kuita pane yako iPad, asi zvinogona kunyatso tarisa zvakaipa.
Zvakare, kana iwe ukamboronga kutengesa muPadad yako kana kuitengesa kune mumwe munhu, iwe uchafanirwa kuigadzirisa. Iwe unogona kusakwanisa kuchinjana yako iPad kana iine yakaputsika skrini, uye haugone kuwana yakakwira resale kukosha kana iwe ukaedza kuitengesa ine yakaputsika skrini.
Mune zvisingawanzo mamiriro ezvinhu, Apple unokwanisa gadziridza yako iPad skrini yemahara kana ichingova nekaputsika kadiki. Kana yako iPad ikawira muchikamu ichi uye yakafukidzwa neAppleCare + chirongwa chekudzivirira, zvingave zvakakodzera kuyedza kuApple Chitoro. Ingo usatarisira kugadziriswa kwemahara, sezvo izvi zvisingamboitike.
Mune aya anotevera ndima, ini ndichataura nezve maitiro ekugadzirira yako iPad isati yagadziriswa uye ndokurudzira mamwe emakambani akanakisa anogona kugadzirisa yako yakaputswa skrini nekukurumidza sezvazvinogona.
handikwanise kufona pane iphone nyowani
Gadzira backup ye iPad yako
Iri izano rakanaka kuchengetedza backup ye iPad yako usati wagadzirisa iyo skrini. Nenzira iyoyo, kana chimwe chinhu chikatadza kuita icho chiri kugadziriswa, hauzorasikirwe nechero data rako kana ruzivo rwemunhu!
Kuti utsigire iyo iPad yako, ibatanidze iyo kune komputa yako uye vhura iTunes. Dzvanya bhatani rePadad mukona yepamusoro yekuruboshwe yeTunes, wobva wadzvanya Backup ikozvino .
Tarisa uone vhidhiyo yedu yeYouTube kana uchida tsigira yako iPad kuICloud kubva kuZvirongwa app!
zvinodiwa kuti utenge imba inofamba
Vhara iyo skrini
Iyo yakanaka zano yekuvhara iyo yakaputsika skrini nekutakura tepi kana hombe zip-kukiya bhegi. Nenzira iyo, hauzozvitema netsaona pachipenga chegirazi!
Kufananidza kwesarudzo dzako dzekugadzirisa
Une dzimwe nzira dzakanaka dzekugadzirisa kana yako iPad skrini yakatsemuka. Kana iwe uine AppleCare + chirongwa chekudzivirira chePadad yako, rwendo rwako rwekutanga runofanira kunge rwuri kuApple Store. Yako AppleCare + chirongwa chinofukidza zviitiko zviviri, asi iwe uchabhadharwa madhora makumi mana nemasere ebasa.
Unogona ita musangano kuApple Store iri padyo online kungoona kuti haufanire kumira wakamira kuchitoro zuva rese. Apple zvakare ine tsamba-mukugadzirisa chirongwa, inova sarudzo yakanaka kana ukasafunga 1-2 vhiki yekutendeuka nguva.
Nehurombo, kugadziriswa kweApple iPad kunogona kuratidza m uy inodhura kana iwe usina AppleCare +. Kugadziriswa kwePads nyowani kunogona kudhura kusvika $ 599 ! Kana iwe uchitsvaga sarudzo isingadhuri, ini ndinokurudzira masevhisi e Pulse , in-inoda kugadziriswa kambani. Ivo vanozotumira tekinoroji kune kwauri uye kugadzirisa yako yakaputsika iPad skrini ipapo.
Ndinogona Kutsiva Screen Iri Pangu Pachezvangu?
Iwe unogona kuyedza kutsiva yakaputsika iPad skrini wega, asi ini handikurudzire kuyedza. Kugadzirisa iyo iPad ibasa rakaoma kusimba rinoda seti chaiyo yezvishandiso.
kuchinja sei iphone memoji
Uyezve, Apple haizochengetedze zuva kana iwe ukakanganisa kuyedza kugadzirisa yako wega iPad. Ukangovhura, yako AppleCare + garandi ichave isina. Kana iwe ukaedza kutora iPad yako kuApple Chitoro uye weApple tekinoroji achiona kuti wavhura yako iPad, ivo vanoramba kuigadzirisa.
Zvichitaurwa zviri nyore, usaedze kugadzirisa yako iPad yakaputsika skrini iwe wega kunze kwekunge uine ruzivo rwekutsiva masikirini uye usatye kukanzura yako AppleCare + chirongwa.
Dambura kusuwa uku uye Gadzirisa yako iPad!
Iye zvino unoziva zvekuita kugadzirisa yako iPad yakaputsika skrini ASAP. Ndinovimba iwe unogovana ichi chinyorwa pasocial media kuti ubatsire kudzidzisa yako mhuri uye shamwari zvekuita kana yavo iPad skrini yaputswa. Siya chero mimwe mibvunzo yaunayo nezve yako iPad pazasi muchikamu chekutaura.
Mapatya Mweya: Zvikamu, Bvunzo, Kuburitswa, Zvepabonde, Zviratidzo Uye Zvimwe
Chii chinonzi shamanism? - Ndeipi basa re shaman?
Chii chinonzi Cellular uye Dhata Dzinotenderera Pane iPhone? Kuvhura kana Kuvhara?
Kufungisisa kwehupenyu nerudo
iPhone Inotungamirwa Kupinda: Izvo Chaizvo & Maitiro Ekuishandisa SeMhuri Yevabereki Kudzora
Zvinoreva zveBhaibheri zvemvura muhope
Zvinodiwa Kuti Utenge Imba Yenhare muUnited States
Skype isiri kushanda pa iPhone? Heino mhinduro.
Penzura yangu yeApple Haizobatanidze Kune My iPad! Heino Kugadzirisa.
Ruvara Rwebvudzi Rakanakisisa Paunenge Uine Rosacea - kudzikisira kutsvuka kumeso
Isnapchat ine dambudziko rekubatana neWiFi? Heino mhinduro yekupedzisira yePhones uye iPads!
iPhone Yakaramba Inoongorora Yekuvandudza? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Yakanakisa Nhare mbozha Signal Boosters: Ongororo, Mutengo, Dhiri
Maitiro Ekuisa An iPhone Mune DFU Mode, Iyo Apple Way
Yangu iPhone Haizodzorere. Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!